Nalefa tany amin’ny faritra Betsiboka sy Anosy ilay izy. Tsy tena afaka mandeha amin’ireo toerana na lalana misy lavadavaka na mivaky ireo fiara, raha fanazavana ara-teknika nivoaka tamina fampahalalam-baovao iray. Nalefa amin’ny tanàn-dehibe any amin’ny faritra nandefasana azy ny iray amin’ireo fiara amin’izao fotoana mba hamboarina sy hokojakojaina satria mety haseho sy hampandraisina anjara amin’ny matso amin’ny fankalazana ny faha-59 taonan’ny fahaleovantena. Tsy tena nahavaha olana aloha izany, fa ny kisehoseho ivelany sy ny kabary nifandraika aminy no betsaka. Mbola baraingo mandrak’androany ihany koa ny fomba nampidirana azy tsy tamin’ny fomba mangarahara, ary tsy nisy na tompon’andraikitra ara-panjakana na iray monja aza nitondra fanazavana matotra.